Iwo matsva eIntel processors ane simba kupfuura iyo M1 Pro uye M1 Max, asi ine hunyengeri | Ndinobva ku mac
Intel svondo rapfuura yakaunza ma processor ayo matsva eiyo nhevedzano «Alder nyanza«. Uye mugadziri weNorth America haana kutora nguva refu mu "kuyamwisa" nedata iro maitiro ake ebvunzo anokanda. Zvichienderana nenhamba idzi, dzinokurumidza kupfuura Apple itsva M1 Pro uye M1 Max.
Asi kuenzanisa kune "kunyengera" uye hakusi kwechokwadi. Iwo maIntel processors matsva akagadzirwa kuti desktop makomputa, saka mashandisirwo ayo uye kudziyisa kwayo hazvina basa zvakanyanya, zvese zviri zviviri zvakakwirira. Pane kudaro, machipisi matsva eApple akagadzirirwa chaizvo MacBook Pro, ine simba rinoshanda uye tembiricha yakaderera yekushanda pasina chero makwikwi.
Intel ichangobva kuburitsa chizvarwa chegumi nembiri "Alder Lake" processors. Kune machipisi matanhatu matsva akanangana nemakomputa edesktop, anosanganisira iyo yepamusoro-soro Core i9-12900K, 16-core chip, hafu yavo yekuita yepamusoro, uye mamwe masere macores ekushandisa simba rakaderera.
Kusvika ku1,5 nguva nekukurumidza
Iwo ekutanga mamakisi akawanikwa neGeekbench 5 ye Core i9-12900K ratidza kuti processor inosvika 1,5 nguva nekukurumidza kupfuura Apple's M1 Pro uye M1 Max mune akawanda-musimboti kuita. Iyo Core i9 processor ine avhareji yakawanda-musimboti mamakisi anosvika zviuru gumi nezvisere nemazana mashanu, zvichienzaniswa ne18.500 yeM12.500 Pro uye M1 Max.
Pabepa, aya maIntel processors matsva ane simba kupfuura maARM matsva eApple. Asi ramba uchifunga kuti ekutanga akagadzirwa kuti agadzirwe pamakomputa edesktop, nepo ekupedzisira ari chaiwo kune Apple's MacBook Pro laptops. Saka mutsauko mukushandiswa kwesimba uye tembiricha yekushanda pakati peimwe neimwe yakashata, nekuda kweM1.
Intel inotsanangura kuti Core i9 inoda kusvika 125 W power at base frequencies and up to 241 W yesimba neTurbo Boost. Hazvifungidzike palaptop.
Kuti tive vakanaka, saka, isu tichafanirwa kumirira chizvarwa chegumi nembiri cheIntel processors yemalaptop, iyo ichatangwa pakutanga kwe2022, uye ipapo ichave "yakachena" kuenzanisa neApple's M1 Max uye M1 Pro. Tichaona ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » Iwo matsva eIntel processors ane simba kupfuura iyo M1 Pro uye M1 Max, asi ine hunyengeri